Ukucocwa kweenkcukacha kunye namaxabiso eMoto Z4 kunye neZ4 Force | I-Androidsis
Ukucocwa kweenkcukacha kunye namaxabiso oMlilo Z4 kunye noMkhosi weZ4
Siye sathetha ngaphambili Moto Z4, kwinqanaba eliphakathi elilandelayo lenkampani yeLenovo eya kuthi kungekudala ingene kwimarike.
Ngoku umntu ongaphakathi, ogama linguAndri Yatim, obesoloko evuza ulwazi malunga neefowuni zeMotorola iminyaka eliqela, utyhile Iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nexabiso lesi sixhobo. Ukongeza, ikwafumene iinkcukacha eziphambili kunye nexabiso le- Umlilo iZ4 Force.
1 IMoto Z4: ixabiso kunye neenkcukacha ezichaziweyo
2 Moto Z4 Force: ixabiso kunye nokubalulwa
IMoto Z4: ixabiso kunye neenkcukacha ezichaziweyo
Ngokwolwazi ekwabelwana ngalo nguYatim, I-Moto Z4 iza kufika ine-6.4-intshi ye-OLED yesikrini eya kuthi ixhase isisombululo se-FullHD + kwaye iya kudibanisa umfundi weminwe uqobo.
Iqonga leselula Snapdragon 675 iya kuyinika amandla i-smartphone. I-SoC iya kuxhaswa yi-6GB ye-RAM kwaye iza nokugcinwa kwendalo kwe-128GB. Ngaxeshanye, iselfowuni iya kufika nge-IP67 chassis ekaliwe, ebonelela ngokumelana namanzi nothuli.
Isimbozo esingasemva sefowuni siya kuba nefayile ye- Ikhamera enye ye-48 megapixel ye-Smart AI ene-f / 1.6 ukuvula. Ukuthwebula ii-selfie, iya kuxhotyiswa nge-24,8 MP aperture f / 1.9 ngaphambili yekhamera. Kwelinye icala, iMoto Z4 iya kuba nebhetri yomthamo we-3,632 mAh. Ukuvuza kwangaphambili kwakubanga ukuba kuyakufika ngenkxaso yeTurboCharge iteknoloji yokutshaja ngokukhawuleza.
Umntu onolwazi ubanga oko IMoto Z4 iza kufika ngexabiso elifikelelekayo le- $ 399. Iingxelo zangaphambili zazibanga ukuba izokwazisa nge-4GB ye-RAM + i-64GB yokugcina kunye ne-6GB ye-RAM + ne-128GB eyahlukileyo yokugcina.
Moto Z4 Force: ixabiso kunye nokubalulwa
Ukunikezela ngeMoto Z4 evuzayo ngaphambili
UMkhosi woMlilo weZ4 uya kuba ngumahluko wokuqala wokuqala kunangaphambili izakufika zondliwe ngu Snapdragon 855, into eyenza ukuba iflegi yokusebenza ephezulu. Le SoC iya kuncedwa yi-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Umntu onolwazi akazange abelane ngemifanekiso yoMkhosi weZ4. Okwangoku, siyakubalaselisa oko Kukho amathuba okuba iza kufika kunye nescreen esifanayo esiphethe iMoto Z4. Iya kuxhotyiswa ngesikena sokubonisa iminwe.
IMotorola Moto Z4 Play iyeza-ngoku ifumana isatifikethi seFCC
I-smartphone iya kuzisa into engaqhelekanga indibaniselwano yeselfowuni zekhamera kaSony kunye neOmniVision. Ukuseta ikhamera kathathu kweZ4 Force kunokubandakanya inzwa ephambili ye-48-megapixel ene-f / 1.6 aperture, 13-megapixel secondary sensor with f / 1.8 aperture, and a f / 2.0 aperture telephoto lens. Uya kuba ne-selfie efanayo efumanekayo kwi-Moto Z4 smartphone (24,8 MP ukusuka f / 1.9).
Iya kuba nebhetri encinci ye-3,230 mAh. Malunga namaxabiso, Umkhosi weZ4 uza kubetha imarike malunga ne- $ 650.
Okokugqibela, umthombo ukwatsho ukuba IMotorola ingabhengeza iimodyuli ezintsha zeMoto ecaleni kochungechunge lweZ4. Nangona kunjalo, khange yabelane ngolwazi malunga neshedyuli yokwazisa eyi-Z4 kunye neZ4 Force Force.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucocwa kweenkcukacha kunye namaxabiso oMlilo Z4 kunye noMkhosi weZ4
Iintsomi zomoya, okanye xa iMMO inokusishiya sifunxwe bubuhle bayo kwimizobo
I-HTC iceba ukumilisela uluhlu oluphakathi oluphakathi kwaye iludlulise kwi-Geekbench